အသားအရေနှင့် အလှအပ » အခြားအရေပြားပြဿနာများ
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe | ရေးသားသူ Dr. Kaung Thar
သုက်လွှတ် နာကျင်ရခြင်း ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်း ခွဲစိတ်ခြင်း အာရုံကြောနာကျင်ခြင်း ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး စိတ်ကျကုသဆေးများ ပန်းသေပန်းညှိုး
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, အမျိုးသားကျန်းမာရေး ဧပြီ 17, 2020 .2mins read
အရည်အိတ် သားဥအိမ်အရည်အိတ် သားဥအိမ်အလုံးတည် အကျိတ် အယူအဆမှား အရပ်ပြောစကား ခွေးအမွေး ကြောင်အမွေး လူပြုစား ဆေးပညာ ဆေးကုသမှု ခွဲစိတ်ကုသမှု
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ ဇန်နဝါရီ 20, 2020 .2mins read
ကင်ဆာ ရင်သားကင်ဆာ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ရင်သား အကျိတ် ကုသမှု ရောဂါ ဟော်မုန်း သွေးဆုံးချိန် ပျိုဖော်ဝင်ချိန် မိန်းကလေး ရာသီစက်ဝန်း
ရင်သားကင်ဆာ, ကျန်းမာရေးစင်တာ ဒီဇင်ဘာ 24, 2019 .2mins read
Sternocleidomastoid Tumor ကလေးလည်ပင်းအကျိတ် ကလေးအကျိတ် လည်ပင်းအကျိတ် လည်ပင်းစောင်း မွေးရခက် တင်ပဆုံဖွား မွေးချိန် ကြာ
ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း စက်တင်ဘာ 19, 2019 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် အောက်တိုဘာ 13, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 16, 2020 .2mins read
အန်တဲ့အခါ ဝမ်းသွားတဲ့အခါ သွေးပါတာ စိုးရိမ်စရာလား။
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 10, 2020 .3mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇူလိုင် 7, 2020 .2mins read